जनताको समस्याहरुलाई सम्बोधन गरि कलाकारले देशको सेवा गर्न नपाउने?’ रेखा थापा - Micro Sansar
Apr 4, 2021 Rekha Thapa, रेखा थापा
नेपाली चलचित्र क्षेत्रकी सर्वाधिक चर्चित नायिका हुन रेखा थापा। नेपाली चलचित्र जगतमा थापाले बिगतमा एकछत्र राज गरेकि थिइन । चर्चा कमाइरहेकै बेलामा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई उनले एउटा मञ्चमै नचाएकी थिइन्, त्यसले नेपाली सिने क्षेत्र मात्र नभएर राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि तताएको थियो। तर, कुनै बेला माओवादी निकट रहेकी रेखा अहिले राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टी (राप्रपा)मा छिन्।
उनी राप्रपाको महाधिवेशनबाटै केन्द्रीय सदस्य चुनिएकी हुन्। रेखा अहिले राप्रपाको संगठन सुधार र राप्रपाको राजनीतिक, वैचारिक ‘लाइन’मा समाहित भइरहेकी छिन्। यही सिलसिलामा रेखा शनिबार नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकामा राप्रपाको गाउँपालिकास्तरीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण भेलामा पुगेकी थिइन । उनी उपस्थित रहेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिको रुपमा राप्रपा अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी थिए ।
राप्रपाको महाधिवेशन वैशाखमा हुँदैछ। रेखा राप्रपाको महाधिवेशनलाई लक्षित गरी नुवाकोट पुगेकी हुन। ‘अहिलेको राजनीतिलाई दोस्रो पुस्ताले सुधार्नुपर्छ। कुनै पनि सत्ता सञ्चालनमा गाली र गुनासो मात्रै गर्ने हामी मैदानमा नउत्रिए विकृति विसंगति रोकिन्न,’ उनी भन्छिन्, ‘कहाँ कमजोरी छ? जनताको भावना हामीले कहाँनेर बुझिरहेका छैनौं? जनतालाई आश्वासन मात्र दिइरहेका छौं। तर, अब युवापुस्ताले जनताको भावना सम्बोधन गर्न नेतृत्व छान्न सक्नुपर्छ।’ अहिले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला चलिरहेको छ। निर्वाचन होला भन्ने पनि शंका छ।
थापा त्यसरी चुनाव भए नेतृत्वमा आउन सक्ने क्षमता आफूसँग भएको बताउँछिन्।
राप्रपाको वैचारिक राजनीतिक उद्देश्य छ- हिन्दु राज्य र राजसंस्था पुर्स्थापित होस्। त्यो एजेण्डामा लागेकी रेखा भन्छिन्, ‘अब वैकल्पिक शक्ति चाहिएको छ। राष्ट्रियता र देशको आफ्नै सपथ खाँदा पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदानलाई सम्हाल्ने अवसर छ। हिन्दु राष्ट्रको आन्दोलनलाई पनि सम्बोधन गर्दै लान सक्नुपर्छ। अरु पार्टीका मानिसलाई आउन पनि प्रेरित गर्नुपर्छ।’ अहिलेको परिवर्तित व्यवस्थाले जनताका कुरा कति सम्बोधन गर्न सक्यो भन्दै थापा भन्छिन्, ‘त्यसलाई आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने लाइनबाट हामीले सोच्नुपर्छ। विगतमा त्रुटि भएका छन्। हामी युवापुस्ताको टाउकोमा ती त्रुटिको दोष नपरोस्। सही दिशा दिन सक्नुपर्छ।’
उनी भन्छिन : ‘राप्रपा अहिले एकदमै सानो पार्टी होला। जनताले विश्वास गरेको सन्दर्भमा र हामीले बनाएको सन्दर्भमा त्यो पार्टी ठूलो हुन पनि सक्छ,।
थापा राप्रपाको प्रवास विभागको अध्यक्ष पनि छिन्।
हेर्नुहोस् कम्युनिष्टमा पनि बसेर काम गरेँ। होडिङ बोर्डमा एउटा एजेण्डा थियो, तर व्यवहारत: थिएन,’ उनले भनिन्, ‘यहाँ सिद्धान्तले मात्र काम गर्दा रहेछन्। केन्द्रमा जनता र देश हुनपरो। व्यवस्थामा जनताले दु:ख पाउनु भएन। महिलाको मुद्दा मिल्न परो, मेनुमा एउटा कुरा, व्यवहारमा अर्को कुरा हुनुभएन।’
‘अहिले राजनीति भन्नेवित्तिकै युवापुस्ताले नाक खुम्च्याउँछन्। म के चाहन्छु भने मेरो उमेर, म भन्दा सानो उमेरका युवालाई राजनीति फोहोरी खेल मात्र हो भन्ने हैन भन्छु। फोहोरी खेल हो भनेर भागिदिने हो भने राजनीति यसरी नै फोहोरी भएर जान्छ, सचेत युवा जमात राजनीतिमा आउनुपर्छ। सबै ठूलो नेता र प्रधानमन्त्री नै बन्नुपर्छ भन्ने हैन,’ उनी भन्छिन्।
‘नेताहरूले सत्ता कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन्। डर्टी गेम भनेर हामी पछि परेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामीकहाँ रहेका तमाम समस्यालाई सम्बोधन गर्न देशको कलाकारले सेवा गर्न नपाउने?’
थापाले अब एकपल्ट नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्ने बताइन्। नयाँ अनुहार नभएकाले नै राजनीति गतिहीन भएको उनको भनाइ छ।
‘यति कुरा बिर्सियो भने हामी पछि पर्छौं,’ उनले भनिन्, ‘मेरो पार्टीले नयाँ अनुहारलाई मौका दिनुपर्छ।’
वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीका एकैदिन आए १७ शव